DHAGEYSO: Muuse Biixi ”Soomaaliya waa dowladda Kaliye ee adduunka aqoonsigeena diidan!” | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DHAGEYSO: Muuse Biixi ”Soomaaliya waa dowladda Kaliye ee adduunka aqoonsigeena diidan!”
Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi
Hargeysa (Halqaran.com) – Madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ku eedeeyay Madaxda DF ee Soomaaliya inay yihiin Cadawgooda koowaad, isla markaana dhibaato badan ku hayaan.
Mr. Biixi oo hadalkaan ka jeediyay munaasabad lagu xusayay 18-ka May ayaa sheegay in Caalamka dowlada kaliya ee ka soo horjeeda qaranimada Somaliand ay tahay dowladda muddo xileedkeeda uu dhamaaday ee uu hoggaaminayo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
“Waa nasiib darro waa cadaawad aan meel loo dayin, Somaliland haddaan nahay waxaanu leenahay war annaga soomali iska dhaafee adduunkoo dhan ayaan ka rabnaa in nabad lagu wada noolaado, balse Soomaali waxaa noo kala soocan danaheena‘‘ ayuu yiri Madaxweyne Muuse Biixi.
Madaxweynaha Somaliland ayaa sidoo kale sheegay, in dhibaatooyinkii lo geystay Shacabka Somaaliland aysan u heysan cid gooni ah, balse ay mas’uul ka aheyd dowladdii uu hoggaaminayay Maxamed Siyaad Barre, waa sida uu hadalka u dhigay.
Sidoo kale, Muuse Biixi oo xalay ka hadlayay xaflad lagu xusayay sanad-guuradii 30-aad ee ka soo wareegtay asaaskii Somaliland ayaa tilmaamay in muddada ay doonto ha ku qaadatee ay ku dadaali doona helidda ictiraaf.
“Yoolkeena kowaad waa ictiraaf inaanu helno oo uu noqdo Somaliland qaran jira oo qeyrkii wax la qeybsada golayaasha caalamiga ah oo aysan cidina matali karin, waqti kasta ha nagu kacdo, qiima ay doonto ha noogu kacdo, dhiigii loo soo daadiyay mid ka badan ayaanu u daadinaynaa hadii ictiraafka loo baahdo,” ayuu yiri madaxwaynaha Somaliland Muuse Biix.
Hadalka Madaxweyne Muuse Biixi ayaa ku soo aadaya xilli Afartii sano ee uu talada hayay Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamamaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan wax wada-hadal natiijo laga gaaray aysan yeelan DF Soomaaliya iyo Somaliland oo aaminsan inay ka go’day Soomaaliya inteeda kale.
Halka hoose ka dhageyso Khudbaddii uu Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyay Xuska 18-ka May: